आफ्नै नेतृत्वमा मात्रै कांग्रेस सरकारमा जाने डा. महतको प्रष्टोक्ति - सिधा दृष्टी
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूह हतियार छाडेर शान्तिपूर्ण बाटोमा आउनु सकारात्मक भएको बताएका छन् ।
चितवनमा आज सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले सरकार र सो पार्टीबीच भएको सहमति सकारात्मक भएको टिप्पणी गरे । मूलधार र शान्तिको बाटोमा आउनु त ठीकै हो भन्दै डा. महतले सहमतिमा के कुरा छन् भन्नेचाहिँ आफूहरुलाई थाहा नभएको बताए ।
फरक प्रसङ्गमा उनले प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन भएपछि पार्टीले आफ्नो धारणा बनाउने बताउँदै सरकारमा जानुपरेमा आफ्नै नेतृत्वमा मात्रै जाने स्पष्ट
गरे । उनले भने, ‘हाम्रो उपस्थितिविना सरकार बन्न नसक्ने अवस्था बन्यो भने आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा जान्छौँ ।’
सरकार बनाउन कांग्रेसको आवश्यकता परेमा मात्र सरकारमा जाने उनको भनाइ थियो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विधिवत् रुपमा एकै भएकाले अहिले नै कांग्रेसले धारणा बनाउने बेला नभएको डा. महतको भनाइ थियो ।